Game of Thrones: သဲမြွေကားအဘယ်သူနည်း။ - တီဗီ
Game of Thrones: သဲမြွေကားအဘယ်သူနည်း။
Game Thrones Who Are Sand Snakes
ဒီတနင်္ဂနွေ - မေလ ၁-၃ Netflix တွင်ကြည့်ရှုရန် စိုစွတ်သောအမေရိကန်နွေရာသီကို Netflix တွင်ရနိုင်သည် တီဗီ က Bryce Olin လွန်ခဲ့သော6နှစ်က @bryceolin ကိုလိုက်နာပါ
Harpy ၏သားများကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်း (ရာသီဥတု ၅ ၏အပိုင်း ၄) ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ ), ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဘာလဲဆိုတာပြော Dorne ခရီးသွားလာသွားမယ့်ပုံရသည်? သဲမြွေမှ။
အဆိုပါသဲမြွေမင်းသား Oberyn ရဲ့ bastard ဖွားသမီးဖြစ်ကြ၏။ စုစုပေါင်းသဲမြွေရှစ်လုံးရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သဲမြွေသုံးကောင်နှင့်သာတွေ့ဆုံကြမည်၊ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ Harpy's Sons ရှိ Obara, Nymeria နှင့် Tyene တို့တွင်ရှစ်ယောက်အနက်အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
သငျသညျ Ellaria သဲ, မင်းသား Oberyn ၏ယခင်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အနေဖြင့်သိသကဲ့သို့သဲအမည် Jon ကိုနှင်းအတွက်မြောက်ကိုရီးယားအတွက် bastard- မွေးဖွားဘို့နာမည်ဖြစ်သကဲ့သို့, Dorne အတွက် bastard ဖွားကလေးများအဘို့အအမည်, နှင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏
ရာသီမတိုင်မီက HBO ငါတို့အားသဲမြွေများမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုကြည့်။ နောက်ဆုံးတွင်ဤဖြစ်စဉ်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
ဤမင်းသမီးများသည်ပြင်းထန်သောစစ်သူရဲများဖြစ်သည့် Westeros ၏လက်များကိုင်ဆောင်ထားသည့်အမျိုးသမီးများမဟုတ်ကြကြောင်း၊ သူတို့ Lannister ၏ ဦး ခေါင်းခွံများကွဲအက်ရန်စတင်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတိရရန်အရေးကြီးသည်။
နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သည့် High Sparrow တွင် Ellaria Sand သည်သဲမြွေ၏ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
သဲမြွေတွေကငါနဲ့အတူပါ သူတို့လူမျိုးကိုချစ်တယ်။ မင်းထိုင်ခုံမှာထိုင်ပြီးဘာမှမလုပ်ဘဲသူတို့အဖေကိုလက်စားချေလိမ့်မယ်။
- Ellaria Sand မှ Black နှင့် White အိမ်မှ Doran Martell သို့သွားသည် GoT ဝီကီ
Obara သဲ (Keisha Castle-Hughes)
အရ ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ ဝီကီ , Obara Oberyn ရဲ့သမီးများနှင့်ဖြစ်ကောင်းအများဆုံးရက်စက်ကြမ်းကြုတ်၏အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သူမရွေးချယ်သည့်လက်နက်သည်လှံဖြစ်သည်။ သူမဖခင်ကဲ့သို့ပင်၎င်းကိုသုံးရန်မကြောက်ပါ။
Nymeria သဲ (Jessica Henwick)
Nymeria ရဲ့ရွေးချယ်မှုလက်နက်ကတော့နှင်တံပါပဲ။ သူမက preview အတွက်ကြောင်း dude ရဲ့ ဦး ခေါင်းကိုချွတ်ပုံးရိုက်နှင့်အမျှဒါပေမယ့်သင် WHOA ကဲ့သို့! Nymeria သူမ၏အစ်မကဲ့သို့ရက်စက်သို့မဟုတ်သွေးအားဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူမဟာကြောက်လန့်ခြင်းနှင့်အလွန်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောလမ်းအတွက်ခြိမ်းခြောက်ပါတယ်။
vampire ဒိုင်ယာရီ၏ရာသီ 8 ရာသီ hulu အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်
Tyene သဲ (Rosabell Laurenti ရောင်းသူများ)
Tyene သည် Oberyn နှင့် Ellaria Sand တို့၏သမီးဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် Lannisters အပေါ်လက်စားချေရန်သူမအနေနှင့်သူမအမေနှင့်အဆက်ပြတ်နေကြောင်းသင်သိသည်။ Tyene သူမတိုက်သည့်အခါဓားမြှောင်နှစ်ခုကိုအသုံးပြုသည် GoT ဝီကီ သူမအချို့လာမည့်သေဆုံးမှုရှေ့ပြေးနိုင်သည့်အဆိပ်မာစတာပါပဲ။
ဒါကလုယူသောသူသို့မဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ ငါဖြစ်ပျက်ကိုငါမသိပေမယ့်အဆိပ်, အခြားစစ်ပွဲမစတင်မီလက်စားချေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနဲ့တူပုံရသည်?
နောက်တစ်ခု:Thrones ဇာတ်ကောင် ၂၅ ခု၏အကောင်းဆုံးဂိမ်း
တ ဦး တည်းလာကြတယ်လူရာသီ2လာမယ့်ဇာတ်လမ်းတွဲ
netflix အပေါ် flash ကိုသစ်ရာသီ
အွန်လိုင်းလမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်နေသောသေဆုံးရာသီ ၉ ဖြစ်ရပ် ၁၅ နာရီ
ဘယ်အချိန်မှာမြှားရာသီ7netflix ပေါ်ထွက်လာပါဘူး
ဘယ်အချိန်မှာမြှားရာသီ3netflix ပေါ်သွားပါဘူး